> Resource> Nyefee> Mfe Ụzọ Nyefee ozi ederede site na iPhone 6 ka Mac / Windows PC
"Olee otú m nwere ike ịzọpụta ozi ederede site na iPhone 6 ka Mac? M nwere ihe karịrị 300 iberibe ozi ederede na m iPhone ha, ha na dị nnọọ mkpa maka m. Biko nyere m aka. Ekele! "
Dị ka onye ọrụ n'elu, chọrọ nyefee SMS si gị iPhone 6 gị Mac maka ndabere? -Eme ihe n'eziokwu, Apple n'ezie awa a ụzọ ndabere ozi ederede site na iPhone na kọmputa - ndabere iPhone na kọmputa: Jikọọ iPhone gị Mac> ẹkedori iTunes> pịa gị iPhone> Na Summary window, họrọ 'Nke a Computer' na ndabere ebe na pịa 'Back Up Ugbu a'. Otú ọ dị, otú a nanị na-ewepụta ozi ederede na ndị ọzọ na faịlụ n'ime a ngwugwu na ị nwere ike ghara ele ha otu-site na otu. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee SMS si iPhone 6 na kọmputa ikiri n'ọdịnihu, m na-atụ aro ị na-agbalị-esonụ otú:
3 Nzọụkwụ nyefee ozi ederede site na iPhone 6 ka Mac
Gị iPhone 6 na eriri USB;
A Mac ma ọ bụ Windows PC
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone data mgbake) bụ ngwá ọrụ na ga iṅomi gị iPhone niile ozi ederede na-egosipụta na ha n'ihi na ị na-azọpụta gị na kọmputa. Ugbu a, o nwere iche iche Windows na Mac version. Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute dị ka gị na kọmputa sistemụ. N'okpuru ebe a, m ga-ewere otú nyefee ozi ederede site na iPhone ka Mac dị ka ihe atụ-egosi na ị dị mfe nzọụkwụ ịzọpụta ozi ederede site na iPhone na kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa
Pịa Download button ibudata na ịwụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac) na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ẹkedori ya. Jikọọ gị iPhone 6 na gị Mac site ya eriri USB. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na Dr.Fone maka iOS (Mac) achọpụta rụọ gị iPhone 6 dị ka screenshot n'okpuru na-egosi.
Nzọụkwụ 2. iṅomi maka ozi ederede na iPhone 6
Pịa 'Malite iṅomi' bọtịnụ na window ka usoro ihe omume ike iṅomi maka ozi ederede ị chọrọ nyefee si iPhone 6 ka Mac. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole rụchaa usoro. E wezụga na, n'oge usoro, ị pụrụ ịhụ ndị ọzọ data na gị iPhone-ota n'ime Atiya dị ka mma.
Nzọụkwụ 3. Nyefee SMS si iPhone 6 ka Mac
Na-ekpe sidebar, pịa 'Ozi' ka ịhụchalụ niile ederede ozi, gụnyere ehichapụ ndị si gị iPhone 6. Dị nnọọ ego na ndị na-na ị chọrọ iṅomi gị iPhone 6 gị na kọmputa na pịa 'Naghachi' button. Na mmapụta ahụ, họrọ 'Naghachi ka Computer' ịzọpụta ozi ederede site na iPhone 6 gị Mac. I nwekwara ike nyefee ozi ederede Mgbakwụnye si iPhone 6 ka Mac site na ịpị 'Message Mgbakwụnye' na ekpe mmanya na ịlele ndị chọrọ Mgbakwụnye.
The n'elu kwuru banyere ọmụma bụ otú nyefee ozi ederede site na iPhone 6 ka Mac site Wondershare Dr.Fone maka iOS. E wezụga nke a ngwá ọrụ, ị nwere ọzọ nhọrọ - Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ bụ ike inyere gị aka iṅomi ozi ederede site na iPhone 6 ka Mac dị ka mma.
Download Dr.Fone maka iOS idetuo ozi ederede site na iPhone na kọmputa ugbu a!
Otú nyefee videos site na PC na-iPhone for free